Kutaa Niiw Yoork keessatti hojjattoota tajaajiila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalootaa fi waaltaalee maanguddoota keessatti kunuunsan hundumaa keessa hojjatan, talaalii dhukkuba KOOVIID-19ittisu kennuuf guyyaan dhumaa qabamee Wiixata har’a xumuree jira.
Hojjattonni tajaajiila eegumsa fayyaa kanneen mana keessatti dhukkubsataa kunuunsanis ta’e waaltaa namoota abdiin jiraachuu isaanii sodaachisaa ta’ee itti kunuunsan fi kanneen biroo keessa hojjatan akkasumas kanneen idoo biraa hojjatanis hanga Onkolooleessa 7tti akka talaalaman irraa eegama jedhamee jira.
Bulchituun Niiw Yoork Kaatii Hokuu akka jedhanti, hojjattoota tajaajiila eegumsa fayyaa dirqama kan ta’e talaalii KOOVIID fudhachuu diduunkan ka’e , hanqiina hojjattootaa mudachuu maluuf waardiyyonni handaara galaanaa Yunaaytid Isteetes kanneen shaakala ooguuma eegumsa fayyaa qaban hojitti bobba’uuf qophaa’aa jechuun gaafatan.
Hojjattonni sababaa raga Doktoorii kennee kan talaalii kana fudhachuu hin qaban jedheen ala warri talaalamuu diidan hojii akka dhaaban akkasumas gargaarsa mootummaan warra hojii hin qabneef kennuu argachuuf ulaagaa hin guutan jedha waajirri bulchiinsaa kan Niiw Yoork.
Waardiyyoota handaara galaana biyyatti kanneen tajaajiila eegumsa fayyaaf oogumaa fi shaakala qaban hojjachiisuun alattis, mootummaan Fedeeraalaa garee yeroo hatattamaaf hojitti bobba’uu kan wal’ansa fayyaa kennu caasaa fayyaa fi wal’ansaa akka gargaaruun akka hojjatan taasiifna jedhee jira.